Imilo eli-10 yokulwela ukuba buhlungu kunokuba ibonakala - Wwe
Imilo eli-10 yokulwela ukuba buhlungu kunokuba ibonakala
Kwi-wrestling yobungcali, abaxabana basebenzisa iindlela ezahlukeneyo abanazo ukuhlasela abachasi babo. Ezi ntshukumo zinokubakho ukusuka ekuphoseni, kwi-slams, kuhlaselo lwasemoyeni, nakugwayimbo ukuya ekuhambiseni indlela. Ezizodwa zibizwa ngokuba kukugqibezela ukuhamba okanye ukugqiba okuvumela umqhubi ukuba athathe uloyiso kumchasi wakhe. Kwiimeko ezininzi, sibona ixhoba lokuhamba kwe-wrestler lijongise ubuso babo kwintlungu njengoko sikhokelwa ukuba sikholelwe ukuba umntu ekufumaneni isiphelo unamava abuhlungu.
Kufa kangaphi igoku
Nangona kunjalo, njengoko sisazi, ayisiyiyo imeko njengoko zonke zimiselwe kwangaphambili kwaye ukuba iwrestler yayizakufaka inyani yokwenyani kumchasi wayo, inokubashiya benokwenzakala okukhulu kwaye nenqanaba lokwenzakala kwipro- Ukulwa kuya kuba ngaphandle kweetshathi.
Kukho amanyathelo okulwa, nangona kunjalo, anokubonakala engenabungozi kwaye ekhuselekile kodwa anokumenzakalisa ngokufanelekileyo umntu ekufeni. Apha, sijonga i-10 yokulwa okunjalo okubuhlungu ngakumbi kunokuba kujongeka kunjalo.
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Izimvo eziboniswe kwinqaku zezombhali kwaye oko akuthethi ukuba yimidlalo yeSportskeeda.
# 10 i-Backhand chops
URic Flair chops isifuba sikaRandy Orton
Ukucanda luhlobo lohlaselo olwenziwa sisilwa ngokubetha isifuba somdlali welinye iqela, intamo, amagxa, okanye umva waso ngasemva kwesandla saso. Kukho iintlobo ezahlukeneyo apho i-wrestler ikwazi ukujongana neentsholongwane kubachasi bayo, kodwa apha siza kuthetha nge-backhand chop elula ehamba ngokuqhelekileyo kwiindawo ezininzi zokulwa.
Nangona kubonakala ngathi kulula, i-backhand chop ingaba yingozi ngokuxhomekeke kwi-wrestler. Ukuba zibethwe ngamandla aneleyo, ezi chops zinokushiya isifuba somchasi ukungcola okunegazi.
Abo @WalterAUT chops ...
... yep. Isabulala. #WWXTXT #HlabathiLokuziphatha pic.twitter.com/gVTNDkNEyD
-NXT UK (@NXTUK) NgoJanuwari 23, 2020
Isihlwele esiphilayo sihlala siphendula ngesandi esikhulu 'Woo!' ingxolo ngokudibeneyo nanini na xa umlo we-wrestler esitya ezo backhand chops kwisifuba somchasi, ngembeko yeWWE Hall ye-Famer Ric Flair yexesha ezimbini, owenza intshukumo ithandwe. Ukuhamba kuhlala kusetyenziswa yintombi kaRic, WWE Superstar Charlotte Flair.
Kwiminyaka yakutshanje, ii-WWE Superstars ezimbini ziye zafumana ukungaziwa ngokukhupha ezona chops zibulala kakhulu. Omnye wabo ngu-NXT Superstar Roderick Strong kwaye enye yenye ye-NXT UK Superstar kunye ne-NXT United Kingdom Champion WALTER yangoku.
andinabahlobo endizophuma nabo
Kule vidiyo ingezantsi, ungabukela uDaniel Bryan enika ingxelo yakhe ngendlela ezonakalise ngayo ii-chops zikaStrong njengoko beshiye amagazi egazini esifubeni sikaBryan xa bejongana eWWE Greatest Royal Rumble ebibanjelwe eJeddah, I-Saudi Arabia kwi-2018.
Kwakhona, uyabona ukuba zinobundlobongela kangakanani iichops zikaWALTER xa ujonga indlela abethe ngayo iJordani Devlin esifubeni sakhe kwisiqendu sikaMeyi 2019 se-NXT UK kwividiyo engezantsi kufutshane ne-2: 49 yemizuzu yophawu.
# 9 Superplex
URandy Orton ulahla izitayile ze-AJ nge-Superplex kwintambo ephezulu
I-suplex sisenzo esiqhelekileyo esisetyenziswa ngabo bobabini abaqeqeshiweyo kunye nabadlali be-amateur ngokufanayo. Kubandakanya ukubamba iqela elichasayo kunye nokuphakamisa phezulu, emva koko uwe ngasemva ukuze umbethe umqolo welinye iqela emethini okanye phantsi. Kukho izinto ezininzi ezahlukeneyo kodwa apha siza kuthetha nge-superplex.
Akukho mntu uhambisa i-SUPERPLEX efana ne-Orton ... #SDLive #OrtonvsNakamura @Ndiyabonga pic.twitter.com/yskAwrVksW
-WWE (@WWE) NgoSeptemba 6, 2017
I-superplex iyafana nayo nayiphi na enye i-suplex kodwa ibandakanya ukuyihambisa ukusuka kwintambo yesibini okanye ngentambo ephezulu. Ukuhamba kubandakanya ulungelelwaniso oluninzi phakathi kwabo bobabini abaxabanayo ngelixa besenza kodwa kuyabenzakalisa bobabini abaxabanayo, lowo uyenzayo kunye nalowo ubethwayo, njengoko bobabini kufuneka bawele phantsi umqolo onokuphelisa ukonakalisa umqolo wabo.
Ukuba yenziwa ngaphandle kwesilumkiso, inokonakalisa nentamo okanye intloko. IWWE Hall of Famer 'Cowboy' uBob Orton uhlala ebizwa ngokuba nguye owazisa le ntshukumo kwaye ngoku ihlala isetyenziswa ngunyana wakhe kunye neWWE Superstar Randy Orton.
indlela yokufumana inyathelo lokukhula komntwana oza kuphuma
kukangaphi ubona umfana wakho
aj lee kunye nodaniel bryan
Ngaba ujulia robertsen unabantwana
sara lee amarhe anzima aneleyo
john cena theme song iingoma